Otu esi egbochi ndị ohi n’ohi ọdịnaya gị
Thursday, July 8, 2010 Fraịdee, June 15, 2018 Douglas Karr
N'izu a, ụfọdụ n'ime gị chọpụtara na agara m onye na-ede blọgụ na-ezu ohi ọdịnaya Martech Zone. Mgbe ụfọdụ, nke a na-eme ka mmadụ nwee obi ụtọ ma kpebie na ha na-emere m ihe ọma site na ịgbasa ndị na-ege m ntị. Ọ bụghị ikpe. Onye na-egwu egwuregwu a bipụtara post ahụ na saịtị ndị ọzọ nwere aha ya dị ka onye edemede. Anabataghị ya.
Nwoke a zipụrụ ozi ezuru ezu na blog blogger ya. Nke ahụ abụghị amamihe, ebe Blogger na-agbaso ndetu ndetu Digital Millenium Copyright Act (DMCA). M dejupụtara akwụkwọ Blogger ma nata ọkwa taa na ha wepụrụ ọdịnaya ezuru ezu.
Enwere m ekele maka nkwado nke Blogger na nke a!
Etu aga esi akwado maka inata ọdịnaya gi
Ọ dị mkpa iburu n'obi na m na-ama ụma ahapụ ụzọ ntụcha bred na blọgụ m. Ọ na-esiri ndị ohi a ike idegharị ma ọ bụ detuo ọdịnaya ahụ ma mado ya. Kama nke ahụ, ha na-ede algọridim ma jide nri RSS gị ma wepụ ya na blọọgụ ha. Ọtụtụ oge nke a na-eme, blogger amaghị. Abụ m. Otu n'ime ihe mere m ji mepee PostPost ngwa mgbakwunye bụ ka m nwee ike idezi ma tinye ọdịnaya n'ụkwụ m. Ọ bụla post na m RSS ndepụta nwere ụfọdụ ụdị nke njikọ azụ m blog.
Ọzọ, m melite Alerts Google na ngalaba m dị ka okwu ọchụchọ (yana ụfọdụ ndị ọzọ enweghị m ike ịgwa gị banyere ya). Ugbu a - oge ọ bụla mmadụ jikọtara na blọọgụ m, ana m enweta ozi email yana obere ọkwa ahụ. Ọ bụ ozugbo amata mgbe m na-agụ m ọdịnaya na ahu nke njikere.
Ikekwe otu n'ime ihe ndị kachasị njọ m na-eme bụ na m na-azụta ihe oyiyi site na iStockPhoto maka ozi m niile maka izu na-esote ma ọ bụ karịa. Ebe ọ bụ na m na-akwụ ụgwọ foto ahụ, ọ kwadoro m ka m jiri ya ma ọ nweghị onye ọzọ. Y’oburu n’iburu onye nzuzu izuru oria m, i ghaghi iweputa onyonyo ndi azuru. Ugbu a, enwere m nnukwu ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ịlụ ọgụ ikike nwebisiinka n'akụkụ m. Ozugbo m hụrụ ọkwa bipụtara, ana m akpọtụrụ nkwado site na iStockPhoto ma kọọrọ nke ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ, ihe oyiyi ahụ, ebe ha si bịa na ezuru ha.
N'ikwu eziokwu, ejighi m n'aka ma ọ bụrụ na iStockPhoto agbasola ikpe ọ bụla… ha niile agbadatala posts ahụ mgbe m chọtara ha wee gwa ha. Enwere m obere obi amamikpe na ya maka m. Achọghị m ka m nọrọ na-ezighị ezi n'akụkụ nke a nwebisiinka uwe na iStockPhoto. Ha nwere akpa miri emi na ọtụtụ ndị ọka iwu.
Gwa ndi enyi ha
Anaghị m agbachi nkịtị. M na-eme a Whois.net nyocha iji chọpụta ụlọ ọrụ na-eweta ụlọ ọrụ na onye nwe saịtị ahụ. Aga m agbalị ịkpọtụrụ onye ahụ ozugbo. Mgbe ahụ ozi ịntanetị na-aga ụlọ ọrụ nnabata, tweets na-ewe iwe, na ozi Facebook Wall. Agaghị m akwụsị ruo mgbe m malitere ịzaghachi azaghachi.
Dịka m kwuru na mbụ, agaghị m agabiga ebe a. Enwere ohere mgbe ọ bụla na mmadụ ga-ezu ohi ọdịnaya m ma pụọ ​​n'ọdụ ụgbọ mmiri, zoro ezo, na ọ gaghị ekwe omume ịchụ. Aga m eme ike m niile ịkọwa ha na igwe nyocha na oge ahụ, mana Agaghị m ahapụ ha ka ha laa. Ikwesighi!
Jul 9, 2010 na 8: 12 AM
Nke a bụ nnukwu ọkwa!
Mana m nọ na-eche ma ị ga - enye m ndụmọdụ ụfọdụ gbasara aghụghọ ma nwee ọnọdụ yiri ya.
Ka anyị kwuo na ndị mmadụ na-eziga onyonyo gị na nseta ihuenyo nke ihe onyonyo gị na mbido onyonyo na-enweghị aha (gụọ: 4chan.org), nke ama ama maka ileghara ihe ọ bụla anya. Kedu ka m ga - esi wepu ihe ahụ ma ọ bụrụ na amaghị m onye ọ na - eziga ya?
Jul 9, 2010 na 9: 20 AM
Nwere ike ime ihe ole na ole:
1) Watermark gị ihe oyiyi. Detuo ha na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ aha weebụsaịtị. Were a lee anya na saịtị dị ka iStockphoto na ị ga-ahụ nke a.
2) O doro anya na iwu 4chan na a ga-emeso mmebi iwu n'ụzọ siri ike. Aga m akpọtụrụ ha site na ibe ịkpọtụrụ ha http://www.4chan.org/contact - ọ bụrụ na ha azaghị, zigara ha ozi na Twitter ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ ị nwere ike.
3) Ikpeazụ okporo mmiri mgbalị: can nwere ike kpọpụ ha. Karịsịa ma ọ bụrụ na saịtị ahụ abụghị onye mba ọzọ na amaara ndị nwe ya, soro ha.
Jul 9, 2010 na 9: 29 AM
Nke a ga-adaba na otu "Kpachara Anya Doug".